”Dadku Daalibaan ayay arkaan balse waxaa jira dal Somalia la yiraahdo oo cashar u dhigay Maraykanka” – Wargays Hindi ah oo qoraal dheer ka qoray dhacdadii 3-dii Okt. 1993-kii | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Dadku Daalibaan ayay arkaan balse waxaa jira dal Somalia la yiraahdo oo...
(Hadalsame) 03 Okt 2021 – Wargays kasoo baxa Hindiya ayaa soo qaatay dhacdadii 3-dii Oktoobar 1993-kii ee lagu soo ridey laba dayuuradood oo ah nooca Black Hawk isla markaana lagu diley 18 askari oo Maraykan ah kaddib dagaal ka dhacay dhinaca sare ee Suuqa Bakaaraha.
Mareykanka, ayaa markale hoos yimid indhaha adduunka kaddib markii uu si lama filaan ah ciidamadiisa ugala baxay Afgaanistaan. Daaqadaha taariikhdu waxay muujinayaan inta badan Vietnam iyo Afgaanistaan, laakiin waa lagama maarmaan in la xuso dalka yar ee Somalia, ayaa lagu bilaabay qoraalka wargayska Hindi.
Dhacdadan waxaa loogu magac daray Dagaalkii Muqdisho yacni Dagaalkii Muqdisho. Sannadkii 1993-kii, Madaxweynihii Maraykanka ee xilligaas George Bush wuxuu ku diray askartiisa magaca nabad ilaalinta Soomaaliya.
Bishii Janaayo 1993-kii, waxaa isbaddal ku yimid awoodda Mareykanka waxaana la wareegay Bill Clinton. Meelaha qaarkood, nidaamkii Clinton wuxuu oggolaaday in la kordhiyo ololaha Mareykanka ee Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, Madaxweyne Clinton ma uusan ogeyn in tallaabadani ay noqon doonto arrin ceeb weyn ku ah Mareykanka.
Waxay ahayd maalin Axad ah taariikhduna waxay ahayd Oktoobar 3, 1993-kii, markaas oo koox ka tirsan Hawlgallada Gaarka ah ee Ciidanka Mareykanka ay u dhaqaaqeen soo qabashada laba qof oo muhiim u ahaa Maxamed Faarax Caydiid, oo gacanta ku hayay qaybo ka tirsan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Kooxda Mareykanka ayaa heshay xog ku saabsan kulan qarsoodi ah oo ay ku yeelanayeen Muqdisho. Ciidamada Maraykanku waxay dejiyeen hadafkii ahaa in hawlgalkan lagu dhammeeyo 45 daqiiqo illaa 1 saac gudahood, laakiin waxa meesha ka dhacay lama filaan bay ku noqdeen.
Ciidamada kumaandooska Mareykanka ayaa diyaarad ka soo degay magaalada waxayna doonayeen inay dib ugu soo laabtaan saldhiggooda marka ay shaqadooda dhameeyaan, laakiin dagaalyahannadii Soomaalida iyo dadka rayidka ah ayaa si wada jir ah u toogtay laba diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaca ah oo lagu magacaabi jiray Black Hawk, laakiin waxaa sidoo kale la dilay 18 askari oo Mareykan ah.
84 askari oo Maraykan ah oo u gurmaday ayaa si xun u dhaawacmay. Duuliye ka tirsan Ciidanka Maraykanka oo lagu magacaabo Mike Durant ayaa la qabsaday, kaas oo la badbaadiyey 11 maalmood kaddib markii la bixiyey dadaal badan.
Mareykanka, oo sheegta inuu u doodo xuquuqda aadanaha adduunka, ayaa boqollaal qof oo rayid Soomaali ah ku dilay dagaalkan si loo badbaadiyo qaar ka mid ah askartiisa. Hollywood-ka ayaa sidoo kale filim ka sameeyay dhacdadan oo dhan kaasoo loogu magac daray “Black Hawk Down”, taasoo muujineysa taageero shucuureed askarta Mareykanka ee soo duushay iyadoo aan wax qiimayn ah la siinnin shacabka Soomaaliyeed.
Weji-gabaxaas iyo dhaawacaas kaddib, Ameerika way soo miyirsatay kaddibna Madaxweyne Bill Clinton wuxuu go’aansaday inuu 6 bilood gudahood uu Somalia kaga saaro ciidamada Mareykanka.
Ka bixitaankii Ameerika kaddib, Soomaaliya waxay sidoo kale noqotay isla goobtii ay ku xooganaayeen ururada argagaxisada sida Al Qaacida, maadaama maanta Afghanistan ay noqotay meel ay ku xoog badan yihiin Taalibaan. Haddii aan u guda galno soo koobidda dhacdadan, Ameerika waxay casharro ka baratay min Afgaanistaan ​​ilaa Soomaaliya. Wax kasta oo ka dhacay Afgaanistaan ​​maanta ma aha markii ugu horreysay, goobta iyo waqtiga ayaa laga yaabaa inay is beddeleen, laakiin waxa ka dhexeeya waa joogitaanka Ameerika iyo siyaasadaheeda ku dhisan daneysiga Ameerika, ayuu warkiisa kusoo koobay wargaysku.
Previous articleArrin uu horay u sharraxay BASAAS caan ah oo si wanaagsan uga socota Somalia + Muuqaal & Sawirro
Next articleSaddex arrimood oo muujinaya in Mahdi Guuleed uu ka baxay taageeradii MW Farmaajo